Wondershare dr.fone ထောက်ပံ့မြစင်တာ
အဘယ်သူမျှမကိစ္စ dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်ကကြုံတွေ့ရသောအရာကိုပြဿနာများ, ငါတို့သည်သင်တို့သူတို့ကိုထွက်အလုပ်လုပ်ကူညီဖို့ဒီနေရာမှာအမြဲရှိပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်း Code ကို retrieve
ကျွန်တော်တို့ကိုအမြန်ဆုံးလမ်း၌သင်တို့ကိုကူညီကူညီ, အောက်ပါ 2-3 မေးခွန်းများကိုဖြေ, ငါတို့သည်ညာဘက်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှသငျသညျကိုလမျးညှနျပါမညျပေးပါ။ (နည်းပညာပံ့ပိုးမှု, ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုသို့မဟုတ်အရောင်း)
ငါသူအချို့ရှိ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို ကျွန်မဝယ်ယူထုတ်ကုန်တွေအကြောင်း။
ကျွန်မအကြောင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ် တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဝင်, ဒေါင်းလုပ်, မှတ်ပုံတင်ကုဒ် ငါ၏အထုတ်ကုန်။
ငါသည်သင်တို့၏အကြောင်းကိုသိလို လိုင်စင်, အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒများ။
ကိုယ့်တာ စတင် နဲ့ကျွန်မမေးခွန်းအချို့ရှိသည်။
ငါထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအချို့သောမေးခွန်းများ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ကန့်သတ် ငါ့အဝယ်ယူမီ။
ငါပြီးသား တစ်ဦးဝယ်ယူလုပ် ပေမယ့်ငါ ငါ့အမိန့်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို ။
ငါအလို ငါ့အပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဝေမျှ သည်အခြားဖောက်သည်များနှင့်အတူ။
ကြှနျတေျာ့မေးခှနျးအတှကျကြှနျတေျာ့ရဲ့ iPhone, iPad နဲ့ iPod touch ကနေဖိုင်တွေပြန်လည်ထူထောင်အကြောင်းပါ။
iOS အတွက် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ
Android အတွက် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ
ငါသည်ငါ့ဝယ်ယူမတိုင်မီထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ကန့်သတ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းအချို့ရှိသည်။
Wondershare ဒေါက်တာ, iOS အတွက် Fone
Android အတွက် Wondershare Dr.Fone
ကြှနျတေျာ့မေးခှနျးအတှကျကြှနျတေျာ့ကို Android စမတ်ဖုန်းကနေဖိုင်တွေ recoverying အကြောင်း (Samsung, စသည်တို့။ )
အထက်ပါအဘယ်သူအားမျှကိုသင်စိတ်ဝင်စား program ကိုရွေးချယ်ရန်
မေးခွန်းများကို post နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှအဖြေကိုရဖို့ ကျေးဇူးပြု. PDFelement အဝန်း။
ငါအစီအစဉ်ကိုငါကဝယ်ယူရန်မတိုင်မီငါ၏အ data တွေကို recover လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိရန်လိုကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ software ကိုဖော်ပြထားကဲ့သို့ iOS ကို errros ကိုပြုပြင်တာတွေနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက operating system ကိုပြင်ပါသည်ဟုဆိုလိုသည် (ဥပမာ recovery mode ကိုပါသို့မဟုတ် Apple ကလိုဂိုကွင်းဆက်မှာညပ်မိ) နှင့်နောက်ကျောပုံမှန်လည်ပတ်မှုအနေအထားကိုဖို့ device ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဒေတာကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဤသည်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ၏ paid version မှာအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီး, အလုပ်လုပ်မည်ကိုအဘယ်သူမျှမအာမခံချက်လည်းမရှိ။
Awesome ကို, ပြဿနာဖြေရှင်း! ငါတိုက်ရိုက်အကူအညီများလိုအပ်ပါတယ်။ ကျော် Start
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုတန်ဖိုးထား, သင်၏ Wondershare ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်သင့်အားကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးများ, တောင်းဆိုမှုများ, ဒါမှမဟုတ်ပင်မှတ်ချက်များပေးပို့ပါ။ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တုံ့ပြန်မနိုင်ပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုအခွအေနေတိုပြုလျှင်ကျွန်တော်အကူအညီဖြင့်တုံ့ပြန်နိုင်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်, ထို့နောက်ကြင်နာစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့မြစင်တာသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဘို့သင့်မှတ်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များတန်ဖိုးထားတယ်။ သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ငါတို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးအဖွဲ့ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီးကြောင့်အနာဂတ်လွှတ်ပေးမှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါတယ်လျှင်ကြည့်ပါရန်။ ကျွန်တော်ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်, ငါတို့ကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်နိုင်တာကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်အောင်ကျနော်တို့လုပ်နိုင်သမျှအတိုင်းပြုပါလိမ့်မယ်, သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုအကြီးအသဘောတူညီမှုကိုကူညီလိမ့်မယ်။ သင်သိရ
(အများဆုံးအပ်လုဒ်ကိုဖိုင်အရွယ်အစား: 60 MB)
Pay ကို Method ကို paypal အကြွေးဝယ်ကဒ်
စစ်ဆင်ရေးစနစ် Windows ကို 10 (32bit) Windows ကို 10 (64bit) Windows 8 ကို (32bit) Windows 8 ကို (64bit) Windows7ကို (32bit) Windows7ကို (64bit) Windows Vista က (32bit) Windows Vista က (64bit) Windows XP ကို ​​(32bit) 10.10 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Lion ကို) 10.7 (ခြင်္သေ့) 10.6 (Snow Leopard က) 10.5 (Leopard) 10.4 (ကျား) 10.11 (ဗိုလ်ကြီး) 10.12 (Sierra) အခြား
ကုန်ပစ္စည်းဗားရှင်း Windows ကို (7.0.2) Windows ကို (7.1.0) Windows ကို (7.2.0) Windows ကို (7.3.0) Mac အတွက် (6.1.0) Mac အတွက် (6.9.0) Mac အတွက် (7.0.0) အခြား
စစ်ဆင်ရေးစနစ် Windows ကို 10 (32bit) Windows ကို 10 (64bit) Windows 8 ကို (32bit) Windows 8 ကို (64bit) Windows7ကို (32bit) Windows7ကို (64bit) Windows Vista က (32bit) Windows Vista က (64bit) Windows XP ကို ​​(32bit) 10.10 (Yosemite) 10.11 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Lion ကို) 10.7 (ခြင်္သေ့) 10.6 (Snow Leopard က) 10.5 (Leopard) 10.4 (ကျား) 10.11 (ဗိုလ်ကြီး) 10.12 (Sierra) အခြား
အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို အန်းဒရွိုက် SD ကတ် Data Recovery အန်းဒရွိုက်ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ Data Recovery ကို Failed အန်းဒရွိုက် Lock ကိုမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေး
egiPhone6, Samsung Galaxy Note III ကို
5.1 က Android egiOS 9.0,